HS:-Kulan ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay ku qabteen hoteelka Safaari ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay siweyn ugu taageerayeen ku taageerayeen waxqabadka iyo siyaasada madaxweynaha Soomaaliya.
Dhalinyarada oo munaasaba kasoo jeediyay khudbado, heeso, iyo Gabayo muujinaya dhamaan taageerada ay u hayaan madaxweynaha dalka korna u hayay sawirada madaxweynaha ayaa waxa ay halkaasi ku soo bandhigeen .
Waxa ay isku raaceen dhalinyarada munaasaba ka hadlay dhamaan in madaxweyne Xassan Sheekh uu wax badan dalka u qabtay intii uu talada dalka hayay, hadana laga sugaayo in uu sii horumariyo hanaanka dowladnimo si loo gaaro 2016-ka oo ah xiliga ay ku egtahay xilka uu hada ku magacaaban yahay si bay yiraahdeen dalka uga dhacdo doorasho.
Munaasabada waxaa ka qeyb galay abwaanno iyo fanaaniin caan ah bulshada Soomaaliyeed amaba inta ku hadasha luqada Soomaaliga kuwaasi oo ay ugu horeeyaan abwaanka weyn Sangub iyo Qoomaal iyada oo kooxda deegaan ay halkaasi kusoo bandhigtay heeso ka tarjumaya midnimada umada Soomaaliyeed.
Inkasta oo aan halkaanlagu soo koobni karin qudbadahii ay halkaas ka jeediyeen dhalintii Soomaaliyeed ee madasha iskugu timid hadane waxaa goobta looga tacsiyadeeyey dadkii ku dhintay weeraradii dalka Jabouti iyo kii xarunta baarlamaanka waxaana ugu danbeyn siwadajir ah loo taageeray siyaasada madaxweynaha Soomaaliya.
Ma ahan markii ugu horeysay ee shirar noocaan ah oo siweyn loogu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya labgu qabto meelo badan oo dalka ka mid ah waxaan shir midkaan oo kale ay dhawaan ku qabteen magaalada Mogdishu qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyagu si weyn u taageersan dowlada hada jirta iyo siyaasada madaxweynaha Soomaaliya.
Isku soo duuboo dalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa iney ka dhacdo doorasho guud taasi oo ay shacabku ay awood u yeelanayaan ciuda ay doonaan min tuulo ilaa madaxweyne iney iyagu soo doortaan si taasi loo helana waa in la xoojiyo isbedelada ku socda wadanka iyagoo ay dhalinyaradu is tusiyeen sidii looga qeybqaadan lahaa nabadeynta iyo xasilinta dalka oo ay dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaadan karaan.
Marka dib loogu noqday siyaasadahii qaribnaa ee wadanka soo maray tobankii sano ee ugu danbeysay hadane madaxweynaha Soomaaliya ayaa u muuqda inuu noqonayo masuulkii ugu shacbiyada badnaa.
· admin on May 29 2014 18:23:00 · 0 Comments · 2535 Reads ·
14,569,448 unique visits